Tsy ampy ny indostria: ny orinasa amin’ny informatika no tena maro | NewsMada
Tsy ampy ny indostria: ny orinasa amin’ny informatika no tena maro
Namoaka ny tatitra 2017 ny sampandraharaha mampiroborobo ny toekarena, Economic Development Board of Madagascar (EDBM), mikasika ny fampiasam-bola sy ny famoronana orinasa eto amintsika. Nahatratra 883 ny orinasa niforona, nahitana fitomboana +14% miohatra amin’ny taona 2016. Sehatra tena iharian’izy ireo ny Teknolojian’ny informatika sy ny fifandraisan-davitra (Ntic), izany hoe, ny lafiny ara-barotra, niisa 43.
Sehatra faharoa ny harena an-kibon’ny tany. Nambaran’ny tale jeneralin’ny EDBM, Andriamihajamananirina Eric Robson, fa raha firenena tena mpampiasa vola teto Madagasikara i Frantsa hatramin’izay, nihoaran’ny avy any Sina izany, indrindra tato anatin’ny telo taona farany. Manampy ireo sehatra roa ireo ny sehatry ny fambolena sy ny fanodinam-bokatra (agri-business), ny fizahantany. Tsikaritra koa, hoy izy, fa manomboka mitombo tsikelikely ny orinasa misehatra amin’ny fanorenana sy ny asa vaventy (BTP).
Azo adika manamarina izany ny fahitana ireo teratany sinoa marobe mividy na mitrandraka harena an-kibon’ny tany eto amintsika, ny trano vaventy aorin’ny Sinoa etsy sy eroa, raha tsy hilaza afa-tsy ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, toy ny eny Ivato, ohatra. Eo koa ny fanamboaran-dalana sy tetezana ataon’ny orinasa sinoa sy frantsay.
Tsy milamina ny fananan-tany
Nitsotra ny DG-n’ny EDBM fa anisan’ny olana diavin’ny mpampiasa vola, indrindra ny vahiny eto Madagasikara, ny lafiny fananan-tany. Maro ny tany tsy mazava ny sata mifehy azy. Hita tokoa ireo tany efa jarin’ny vahoaka an-taony maro, nefa ahitana ady satria misy ny olom-bitsy mampiseho taratasy tsy mazava. Eo koa ny tany mipetra-potsiny, na misoratra amin’ny vahiny fony fanjanahantany, nefa tsy ampiasainy intsony.
Anisan’ny paikady vaovao hampiroboroboana ny fampiasam-bola amin’ny lafiny famokarana lamba sy akanjo ny Faritra manokana ara-toekarena (ZES) amin’ity sehatra ity. Andrasana ny fankatoavan’ny parlemanta ny lalàna mamaritra azy.